Fikarohana momba ny firaisana Raharaha Reincarnation an'i Suresh Verma | Titu Singh & Video - Fikarohana Reincarnation
Trangam-piainana taloha miaraka amin'ny marika momba ny vatana sy ny vatana vaovao
BBC Video of Suresha Verma | Ny tranga nahazo ny zaridaina Titu Singh dia navoaka eto ambany ny faran'ny famaritana
Ahoana no nahatonga izany? Fahatsiarovana ny fiainana teo aloha tamin'ny fahazazany
Fikarohana nataon'ny Profesora NK Chadha sy Dr. Antonia Mills, mpiara-miasa amin'ny Ian Stevenson, MD
From: Article dans la Reincarnation International, Volume 1, No. 2, nataon'i Roy Steman
Notantarain'i Carol Bowman & Steve Bowman avy amin'i www.carolbowman.com
Natontan'i: Walter Semkiw, MD
Ny fizarana teraka ao amin'ny vatana vaovao sy ny mariky ny fiainana taloha dia manome porofo momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao
Ny trangan'i Titu Singh izay niseho tao amin'ny gazetiboky Londres, Reincarnation International, dia iray amin'ireo trangan-javatra mahavariana kokoa momba ny nahaterahan'olon-droa. Ity tantara ity dia nalefa voalohany tao amin'ny 1990 tao amin'ny fandaharan'asan'ny BBC TV Fortry Minutes. Ny tranga nahazo an'i Titu izay nanonona anarana sy antsipiriany momba ny famonoana azy manokana dia nahatonga fahitalavitra mahafinaritra, marina avokoa. Apetraho eo amin'ny sary ny kursorinao.
Titu Singh dia mahatadidy ny fiainany taloha, ny vadiny, ny fivarotana ary ny fahafatesany
I Titu Singh dia roa taona sy tapany teo ho eo raha nanomboka nilaza tamin'ny fianakaviany ny fiainany hafa tao Agra, tanàna iray any avaratr'i Inde. Ny fahatsiarovany dia tena voafaritra manokana: nilaza izy fa tompon'ny radio, fahitalavitra ary horonan-tsary, ny anarany dia Suresh Verma, nanana vady iray antsoina hoe Uma izy ary ankizy roa. Nolazainy ihany koa fa nokapohina izy, avy eo nopotehina, ary natsipy tao anaty renirano ny lavenony.
Ny ray aman-dreniny dia tsy nandray azy tamim-pahamendrehana tamin'ny voalohany, fa ny fihetsik'izy ireo dia nanahiran-tsaina azy ireo-matetika izy no nanao toy ny hoe tsy anisan'ny fianakaviany. "Zatovo tsotra i Titu, fa indraindray izy milaza sy manao zavatra izay olon-dehibe ihany no manao," hoy ny rainy.
Titu dia mitebiteby mba handositra ny fiainany taloha
Indraindray dia nilaza tamin'ireo ray aman-dreniny i Titu fa mpikarakara trano fonenana izy ary te hiverina any Agra. Indray andro dia nisisika ny hiala izy, ka nanakodia ny akanjony tao anaty lambondriaka ary nandrahona ny hiala tao an-trano. Ity fihetsika ity koa dia hita ao amin'ny: Firaisana ara-piraisana ara-piraisana ara-biraon'ny Twins Burmese
Titu's Life Life Shop & Wife dia hita
Fiorenam-pirahalahiana momba ny sehatry ny fanambadiana
Nanapa-kevitra ny hiverina tany Agra ny zoky zokin'i Titu mba hanamarina ny filazan'ny rahalahy zandriny. Nahita televiziona, radio ary horonan-tsary izy, antsoina hoe Suresh Radio, izay notarihan'ny mpitondratena iray antsoina hoe Uma izay voatifitra ny vadiny, araka ny nilazan'i Titu azy. Ny sarimihetsika dia aseho amin'ny ankavanana. Nitranga tamin'ny volana 1983 ny famonoana. Nanatona an'i Uma ilay rahalahy ary nanazava ny tenin'ilay zandriny lahy hoe ny vadiny efa maty. Izany vaovao izany dia nahatonga an'i Uma hahatsapa tena hafahafa.
Titu hanaiky an-tsitrapo ny vadiny taloha, Uma, ary ireo rahalahiny taloha
Nanapa-kevitra ny hitsidika ny fianakaviana Singh ny ampitson'iny izy ary hahita ny fahamarinana izay tao amin'io tatitra io. Rehefa tonga tsy nambara ny fianakaviana Verma, dia teo am-pisakafoanana i Titu teo aloha ary nahita azy ireo voalohany. Nanaiky avy hatrany izy ireo ary nihiaka tamin'ny ray aman-dreniny fa tonga ny "fianakaviany hafa".
Nanasa ireo mpitsidika izy ireo mba hipetraka eo amin'ny veranda ary nangataka an'i Uma mba hitoetra teo akaikiny i Titu-fomba mahagaga ho an'ny ankizy dimy taona any Inde mba hitantara vehivavy iray efa lehibe. Nanontany momba ireo ankizy izy ary avy eo dia naneso ilay mpitondratena tamin'ny filazalazany ny antsipirian'ny fianakaviana handeha ho any amin'ny tanàna akaiky iray izay nividianan'i Suresh ny zava-bitany, fampahalalana izay azony fantatry ny rehetra. I Titu tatỳ aoriana dia namariparitra ny volamena tao anaty lavaka iray tao an-trano.
Nasaina nifindra tany Agra àry i Titu. Rehefa tonga izy sy ny manodidina dia natokana ho an'ireo zanany roa i Suresh hilalao amin'ny ankizy maro hafa manodidina ho fitsapana ho an'i Titu. Noraisin'i Titu avy hatrany izy ireo, namoaka azy ireo avy tamin'ny mpiara-milalao azy.
Raha niditra tao amin'ny fivarotana Suresh Radio, dia namaritra tsara ny fanovana natao tao amin'ny fivarotana i Titu hatramin'ny nahafatesan'i Suresh. Ao amin'ny sary eo akaikiny, i Titu dia tao amin'ny toeram-piantsenan'ny radio taloha niaraka tamin'ny vadiny taloha, Uma, izay eo an-kavanana amin'ny tanana voafehy.
Ny ray aman-drenin'i Suresh dia matoky fa i Titu no teraka ao amin'ny vatana vaovao ao Suresh
Ireo fianakaviana roa ireo dia namoaka ny tantara mitohy ao Titu. Nalahelo ny ray aman-drenin'i Titu ny fifandraisany tamin'ny fianakaviany teo aloha. Ny reniny, izay nanana zanaka lehibe dimy, dia tsy nieritreritra azy hiresaka momba ny ray aman-dreniny sy ny fianakaviany teo aloha. Nanazava izy hoe: "Tsapako fa isika rehetra dia samy ao anatin'ny fianakaviana iray ihany. Mampionona ahy amin'ny tsy fivadihan-janany izy, ary nilaza fa na dia manana ray aman-dreny any an-toeran-kafa aza izy dia ho ray aman-drenintsika foana. Saingy nitaraina i Titu fa manao akanjo tranainy aho. Nilaza izy fa nividy Uma lafo vidy izy. "Nilaza ny rain'i Titu fa matahotra izy fa rehefa lehibe kokoa i Titu, dia mety handrava fifandraisana amin'izy ireo izy ary hiaina miaraka amin'ny fianakaviany hafa.
Ny ray aman-drenin'i Suresh dia mahatoky fa i Titu dia zanany lahy maty i Suresh reincarnated. Hoy ny rainy: "Tena mifikitra amintsika i Titu. Indray mandeha teny an-dalana dia nahita tovovavy taloha izy. Nihevitra izy fa iray tamin'ireo zanak'i Uma i Titu. Nalahelo i Titu tamin'ny teniny hoe: 'Tsy fantatrao ve hoe iza aho?' "Hoy koa ny rain'i Suresh:" Mifampiresaka isika hoe ray sy zanaka. Tsy mampirisika azy loatra anefa aho satria manimba ny ray aman-dreniny. "
Tantaran'ny teraka ao amin'ny vatana vaovao: ny ratra nahazo an'i Saresh dia hita taratra amin'ireo marika nahaterahan'i Titu
Miverina ho amin'ny vono olona: Nofaritan'i Titu tsara ny fomba nitifiran'i Suresh ny lohany tamin'ny alina raha nipetraka tao anaty fiarany izy rehefa tonga avy any am-piasana. Izany no nanamarinana an'i Uma. Ny kamera TV dia nampiseho ny tatitra momba ny otopsy an'i Suresh Verma, izay nanamafy fa voatifitra teo amin'ny lohany izy ary maty noho ny ratra tamin'ny bala ka nankany amin'ny tempoly marina. Ny otopsy dia naneho ny habeny sy ny toerana misy ny ratra, ary ny fivoahana dia nafatony teo amin'ny lohan'ny lohan'i Suresh.
Avy eo izy ireo dia nampiseho ny volon'ny Titu nokolokolo mba hanambarana ny fiterahana iray - "endrika manodidina sy manongana izay nifanandrify indrindra tamin'ny toerana nisy ny ratra tafiditra tamin'ilay bala nahafaty an'i Suresh Verma. Ny fakantsariny ihany koa dia naneho ny fahateren'ny faharoa teo ampitan'ny lohan'i Titu izay nifanaraka tsara tamin'ny ratra ivelany.
Nitantara antsipiriany momba ilay vono olona tany amin'ny tribonan'i Agra i Titu ary afaka "nandresy lahatra ireo manam-pahefana fa izy no taonan'ny vaovao momba ny maty." Tsy nomena io tranga io, fa i NK Chadha, mpampianatra tao Delhi Ny oniversite izay nandinika ilay raharaha, dia voalaza fa nilaza hoe: "Noho ny fandraisan'andraikitry ny polisy, ity no iray amin'ireo tranga tena tsara indrindra amin'ny fahaterahana indray vao teraka."
Raha raisina io vatana vaovao io, dia asehony ireto zavatra manaraka ireto:
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Mitovy ny firafitry ny endrik'i Suresh sy Titu.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Suresh indray no nanjary nalaza toa an'i Titu tsy lavitra ny fiainany taloha, izay nahafahan'i Suresh hifanaraka tamin'ny fiainany taloha.
Fiorenam-pirahalahiana: Manana indentation amin'ny tempoliny havanana i Titu. Ny tatitry ny famotopotorana an'i Suresh dia nanambara fa nisy bala tonga tao an-dohan'i Suresh teo amin'io toerana io ihany. Teo amin'ny toerana nivoahan'ny bala teo an-dohan'i Suresh, dia nisy mole teo amin'ny lohan'i Titu teo amin'ilay toerana ihany.